EARN MONEY FROM THE INTERNET.
yee khin zaw
by yee khin zaw on Tue Oct 18, 2011 1:20 pm
Many peoples want to be rich , try everything to earn money . These few years ,we foundaway that can earn money from the internet .
﻿﻿﻿﻿﻿Internet ကို အသုံး များလာသည် နှင့် အမျှ Online မှအပို ဝင်ငွေ ရှာသော လုပ်ငန်း များလည်း တိုးတက် လာပါ သည် ။ Earn Money From the Internet ဟုခေါ်ဆို ကြပါသည် ။ ဝင်ငွေ ရယူ နိုင်သည့် Web Site လည်း များပြားလာ ပါသည် ။ နိုင်ငံ တကာ တွင်လည်း အချိန်ပိုင်း အပို ဝင်ငွေ ရှာသော လုပ်ငန်း အဖြစ် လုပ်ကိုင် သူ များပြား လာ ပါသည် ။
* မိမိ ကိုယ်ပိုင် Web Site တွင် သူတစ်ပါး လုပ်ငန်း ကြော်ငြာ ကိုထဲ့ ပေးခြင်း ၊
* e-mail များမှ တစ်ဆင့် ကြော်ငြာ များ ဖြန့်ဝေ ပေးခြင်း ၊
* Web Site များမှ ကြော်ငြာများ ကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်း
စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိပါသည် ။
မြန်မာ Web Site အတော်များများ သည်လည်း International Online ကြော်ငြာ များမှ ဝင်ငွေ ရရှိနေပါသည် ။
အဓိက မှာ ကိုယ့် Web Site သို့ဝင်ရောက်ကြည့်သူ များ ဖို့သာလိုပါသည် ။
Google Adsense နှင့် Skimlinks မှ ကြော် ငြာ များ ကို မိမိ blog နှင့် web site များ တွင် ဖော် ပြ ပေး ခြင်း ဖြင့် ကြည့် ရှု လေ့ လာ သူ များ မှ ထှို ကြော် ငြာ များ ကို ဝင် ကြည့် သူ အရေ အ တွက် ပေါ် မူ တည် ၍ ဝင်ငွေ ရ ရှိ နိုင် ပါ သည် ။
မြန်မာလူငယ် အတော်များများလည်း NEOBUG , YOU CUBEZ ကဲ့သို့သော Click and Earn မှ အပိုဝင်ငွေ ရှာနိုင် သည့် web site များကို သိသူ များပါသည် ။ SURFING THE NET / SURF PAY PAR VIEW ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြပါသည် ။ သို့သော် CREDIT BANK ACCOUNT လိုအပ် ပါသည် ။
BANK ACCOUNT မလိုသော Web Site များလည်း ရှိပါသည် ။
ငွေသား မပေး ဘဲ ONLINE GIFT ACCOUNT များ ရယူနိုင်ပါသည် ။ Online Gift Account ကို အသုံးပြုပြီး ON LINE SHOPPING များမှ လိုသော ပစ္စည်းကို လဲယူ နိုင်သော ကူပွန် စနစ် တစ်မျိုး ဖြစ် ပါသည် ။ ထို WEB SITE နှင့် ချိတ် ဆက် ထားသော ONLINE SHOPPING တွင် သာ လဲလှယ် ရ ပါမည် ။ e-mail address သာ လိုပါ သည် ။
ထို Account များကို လဲ အဆင်ပြေ သလို ရောင်းဝယ် ကြပါသည် ။
INETGLOBLE သည် AMAZON.COM နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါသည် ။
INETGLOBLE web siteသည် စတင် မိတ်ဆက် စဉ်က ကြော်ငြာ 1 ခု လျှင် sec 20 သာ ကြာ သဖြင့် ရန်ကုန် internet ဆိုင်မှ တဆင့်လည်း လှုပ်ရှား နိုင် သော်လည်း ယခုအခါ sec 30 သို့ပြောင်းလဲပြီး rate this site ဟူသော စနစ်တိုး ချဲ့လိုက် သဖြင့် ကိုယ်ပိုင် online များနှင့်သာအဆင်ပြေပါမည်။
MEMBER အဖြစ် AD. ACCOUNT ဝယ်ထား သူများ အတွက် မူ ပို ကောင်းရန် မျှော်လင့် ရပါသည်။
* သတိပြု ရမည့် အချက်မှာ တတ်နိုင်သမျှ TERMS & SERVICES ကို လေ့လာ ဖတ်ရှူ သင့်ပါသည် ။
ရေရှည် အကျိုးအမြတ် အတွက်လဲ မ မျှော် မှန်း သင့်ပါ ။
INETGLOBLE web site သို့ FREE SURFER အဖြစ် ဝင်ရောက်လေ့လာ လိုသူများ အနေ ဖြင့်
http://www.inetgloble.com သို့ ၀င် ရောက် ပြီး JOIN IN SPONSOR I. D. 64120 ကို ရိုက်ထဲ့ပြီး sign in ပြု နိုင်ပါသည် ။ ထိုအခါ သင့်အတွက် I.D. user name & pass word ကို သတ်မှတ် ပြီးပါက ဆက်လက် လှုပ်ရှားနိုင်ပါ ပြီ ။
တစ်နေ့လျှင် အနဲဆုံး click 24 ခု နှိပ်ရ မည် ဟုသတ်မှတ်ထားပြီး အများဆုံး 100 နှိပ် နိုင်ပါသည် ။ ထိုအတွက် iRewards များ ရရှိ မည် ဖြစ် ပြီး ထို iRewards များဖြစ် AMAZON.COM မှသတ်မှတ် ထားသော တန်ဖိုး နှင့် ညီမျှ သော ပစ္စည်း များဖြင့် လဲလှယ် သည့် Gift Coupon များ ရ နိုင် ပါသည် ။
ref : https://sites.google.com/a/aungbarsay.com/aung-bar-say/earn-money-from-net
Current date/time is Sat May 25, 2019 2:53 pm